Muri pano: musha / Windows 10 Purogiramu inoramba ichikundikana nekanganiso 0x8007001f - 0x20006
The Windows Media Creation chishandiso neMicrosoft chishandiso chinoshanda kuti utore komputa yako kurodha pasi nekuisa yazvino vhezheni yeiyo Windows 10 operating system. Zvisinei, panguva yekugadzirisa, yave ichizivikanwa kupa mhosho inotevera yekanganiso:
0x8007001F-0x20006, Kuiswa kwacho kwakakundikana muchikamu cheSAFE_OS nekanganiso panguva ye REPLICATE_OC.
Safe OS phase: ichi chikamu chinotanga kuisa zvese zvinoshandiswa zvinodiwa. Izvo zvinokonzera izvi zvingangodaro kukanganiswa kunokanganisa, internet connection, nezvimwewo.
Windows 10 kuiswa kwakakundikana, kukanganisa 0x8007001f - 0x20006
Tichave tichitarisa mazano anotevera ekugadzirisa kora yekodzero 0x8007001f - 0x20006 ye Windows 10 Kuvandudza:
shandisa Windows Gadziridza Troubleshooter.
itangezve Windows Gadziridza Zvikamu.
Delete iyo Windows Gadziridza Cache.
Gadzira Firewall kana Antivirus.
manya Windows Kugadziridza muKachena Boot State.
1] Shandisa Windows Gadziridza Troubleshooter
2] Gadzirisazve Windows Gadziridza Zvikamu
3] Bvisa iyo Windows Gadziridza Cache
Dzimwe nguva zviripo zvakashata kana zvisina kukwana Windows Gadziridza mafaera anogona zvakare kukonzera nyaya uye kupokana mukuburitsa uye kumisikidza kwe Windows Update.
Delete $Windows~ BT & $Windows. ~ WS maforodha kana ivo varipo pamakombiyuta enyu.
Tarisa kana izvi zvakagadzirisa nyaya dzako.
4] Gadzira Firewall kana Antivirus
Iwe unogona kuedza kwechinguva disable Windows Defender iyo yakaiswa kunze kwebhokisi pane yako Windows 10 kombiyuta. Iwe unogona zvakare dzima yako Windows firewall pakombiyuta yako uye chengetedza kana izvozvo zvinogadzirisa zvikanganiso zvauri kusangana nazvo. Kana uri kushandisa 3rd-party security software, disable them uye ona.
5] Famba Windows Kugadziridza muKachena Boot State
A Clean Boot inotanga hurongwa nevanotyaira zvishoma uye mapurogiramu ekutanga. Paunotanga kombiyuta mune tsvina yakachena, kombiyuta inotanga nokushandisa sarudzo yakasarudzwa yevatyairi uye mapurogiramu ekutanga, uye nokuti kombiyuta inotanga neine zvishoma zvevatyairi, zvimwe zvirongwa zvingasashanda sezvaunotarisira.
Unogona kumhanya Windows Kwidziridzwa mushure mekubhooting mune Yakachena Boot State uye tarisa kana izvozvo zvichiita kuti chikanganiso chiende.
Zvigadziriswa izvi zvakakubatsira iwe here?